Ciidan Booliska Kenya Katirsan oo Lagu Qarxiyay Degmada Mandheere ee Dhulka NFD.
Thursday October 30, 2014 - 16:15:59 in Wararka by Super Admin
Sida aan kasoo xiganeyno goobjoogayaal ku sugan gudaha magaalada Mandheera Qarax xoog leh ayaa barqanimadii maanta ka dhacay gudaha degmada kaasi oo lala eegtay gaari ay wateen ciidanka booliska Kenya xilli ay roondeyn sameynayeen.
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan oo bu buriyay gaarigii lala beegsaday iyadoo dhimasho Iyo dhaawac ay ku noqdeen weerarka askartii lala eegtay weerarkaas qaraxa ah,dad si hoose ula hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey dhimashada askarta iyo dhaawac kuwo kale waloow aan si rasmi ah loo hayn tirada ciidanka halaagsamay.
askar kale oo ka tirsan kenya ayaa soo gaaray halkii weerarka qaraxa uu ka dhacay iyagoo howlgal raaf ah ka sameeyay xaafadaha Mandheera xabsigana dhigay dhalin yaro badan oo deegaanka ah.
Weerarada qaraxyada ah ayaa kusoo noq noqday degmada Mandheera kuwaasoo ilaa iminka ay xukuumadaas u taag la'dahay,todobaadyo ka hor ayaa sidoo kale isla degmadaas waxaa lagu beegsaday kolonyo uu la socday gudoomiyaha Mandheera ninka lagu magacaabo Ali Roobe inkastoo uu ka bad baaday askar ilaaladiisa ahna ay ku halaagsameen weerarka.
Xukuumadda Nasaarada kenya ayaa guraneysa miro ay beeratay 3 sano ka hor tan Iyo markii ay ciidnkeeda soo galisay Somaliya,dagaalada lagula jiro askarta kenyana waxay ka holcayaan wilaayaadka Gado Iyo Jubooyinka.
Laakiin dadka soomaaliyeed ayaa su'aal isku weydinaya meesha ay ku dambeyn doonto xukuumaddan haadaanta lagu soo tuuray,iyagoo is oranaya "haddaan jug kasiinna Jubooyinka xagee kenya joogsan doontaa".